Kungani Kunzima Ukuyeka Ugwayi - Ama-802Quits
Ama-Vermonters Izizathu zokuyeka Kungani Kunzima Ukuyeka Ugwayi
Noma ufuna ukuyeka, kunezizathu ezimbili ezingenza kube nzima ukukuzwa:
1.Ngoba ukusetshenziswa kukagwayi kuyalutha kakhulu ngakho-ke akuwona nje umkhuba, unesidingo somzimba se-nicotine. Uhlangabezana nokuhoxa kwe-nicotine lapho uhamba isikhathi eside ngaphandle kogwayi noma i-e-cigarette, ugwayi ohlafunwayo, isinemfu noma i-vape. Umzimba wakho "ukutshela" lokhu lapho uthola ukuhahela. Isifiso siyaphela uma ususuthise ukulutheka ngokukhanyisa noma ngokusebenzisa olunye uhlobo lukagwayi. Lungela ukubhekana nalokhu ngokungeza nezimagqabhagqabha zamahhala, izinsini namaloli noma eminye imithi yokuyeka ohlelweni lwakho lokuyeka ukuvumelanisa.
2.Ungaba umlutha wesenzo sokusebenzisa ugwayi. Njengoba umzimba wakho wawukhula isidingo senyama se-nicotine, wawuzifundisa ukubhema, ukuhlafuna noma ukuvota, futhi uziqeqesha ukusebenzisa ugwayi ezimweni eziningi ezahlukahlukene. Lezi zindlela zokuziphatha zinganqotshwa uma uzilungiselela kusengaphambili.
Ukwazi ukuthi ungathanda ukubhekana kanjani nezimbangela ezinjengalezi ezibalwe ngezansi ngaphambi kokuthi ubhekane nazo njengomuntu ongabhemi kuzokusiza uzizwe uqiniseka.
Ukuphuza ikhofi noma utshwala
Ngesikhathi sezingcindezi, impikiswano, ukudumazeka noma umcimbi ongemuhle
Ukushayela noma ukugibela emotweni
Ukuba phakathi kwabangane, osebenza nabo nabanye abantu ababhemayo noma abasebenzisa eminye imikhiqizo kagwayi
Yini ebangela isifiso sakho sokusebenzisa ugwayi?
Bhala izimbangela zakho phansi bese ucabanga ngendlela engcono yokubamba ngayinye yazo. Amasu angaba lula, njengokugwema izimo ezithile, ukuba nensini noma uswidi onzima, ukufaka itiye elishisayo noma ukuhlafuna eqhweni, noma ukuphefumula okuningana.
Ukubambezeleka kungenye yezindlela. Njengoba ulungiselela ukuyeka ukubhema, ukuqhuma noma ukusebenzisa olunye ugwayi, cabanga ngokuthi uvame ukubhema nini okokuqala, ukuhlafuna noma ukuvota kosuku bese uzama ukukubambezela lokho isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Ngisho nokubambezeleka ngesikhathi esifushane, nokwelula ukuthi nsuku zonke kuze kufike usuku lwakho lokuyeka, kunganciphisa izifiso. Ukuze uthole amathiphu nemibono yokuthi ungabhekana kanjani nalezi zidalwa, hlola Ukuhlala Uyeke.